Cirro Iyo Parliament
Fadhigii Golaha Wakiilada ayaa galay xaalad qalalaase ah, taasoo ka dhalatay kadib markii Xildhibaano ka tirsan Golaha oo ka soo horeeda Guddoomiye Cirro u gudbiyeen Sadex Mooshin oo daran-doori ah, kuwaas oo Cirro mid ka mid ah Daaqada ka tuuray, halka Laba ka mid ahna uu u gudbiyey La Taliyaha Sharciga ee Golaha Wakiiladda.
Guddoomiye Cirro ayaa inta aanu tuurin Sadexda Mooshinba Golaha u Akhriyey. waxaanay kala ahaayeen mid ay ku dalbanayeen in kalfadhiga lagu daro muddo bil ah, halka labada kale ay kala ahaayeen kuwo waxa lagaga bedelayo awooda Guddomiye Cirro sidii Ku-Xigeenadiisa oo kale,wax yar ka dibna C/raxmaan Cirro ayaa xidhay fadhiga, waxa diiday in ay Golaha ka baxaan Xildhibaanadii keenay Sadexda Mooshin oo diidan in uu Cirro xidho fadhiga, waxaana abuurmay buuq kadib markii Xildhibaanada Cirro taageersani ay iyana ka bixi waayeen Golaha.
Dabadeed waxa ay xaaladii Goluhu gashay fawdo gaadhay in la kala safto, illaa hadana waxa muuqata in Goluhu galay qalalaase aan la garanyn halka uu ku danbayn doono, Xildhibaanada Cirro taageersan ayaa isku gedaamay kursiga Shirguddoonka iyagoo ka ilaalinaya in Labada Ku-Xigeen ee Shirgudoonku soo fuulaan dusha, si ay hogaaminta ula wareegaan halka Xildhibaanada Mooshinada keenay kuraastooda ku sugan yihiin illaa hadda.
Waxa mararka qaarkood la dareemayaa Xildhibaanada qaarkood oo fara fiiq badan isku samaynaya, hase yeeshee ma jiro dagaal rasmi ah oo ka dhex bilaabmay, wallow ay dhici karaan wax kastaa haddii aan xal loo helin qaska taagan, Golaha Guurtida oo shalay codsaday in ay dhex dhexaadiyaan ayaa ka dhex baxay kadib markii Guddoomiye cirro shalay Shan Xildhibaan ka saaray Guddida Joogtadda ah.